Abavelisi abakhelwe ngaphakathi/ngeTelescopic Hood-iChina eyakhelwe-ngaphakathi/iTelescopic Hood Factory & Suppliers
IHood yokupheka edibeneyo ye-913
IiHoods ezidityanisiweyo kuyilo olwahlukeneyo lobungakanani ukuhlangabezana nezidingo zekhabhathi. Amandla okufunxa ukusuka phantsi (550m3/h) ukuya phezulu (1000m3/h) ngesiseko ozikhethelayo kwisayizi yekhitshi lakho. Onke acoca ngokukhawuleza umoya kwaye asuse umsi ekhitshini kwaye ngengxolo ephantsi ayiphazamisi incoko yokupheka. abantu.
Iphaneli ephambili yeHood inokuba yintsimbi engatyiwayo, iintlobo zepeyinti yombala, iglasi yokutshatisa ikhitshi eyahlukileyo kunye nesimbo sekhabhathi Amandla okwaneleyo ukukhanya kwe-LED kwimilo engqukuva okanye icwecwe elikhethekileyo le-LED linokukhetha njengoko uthanda Ukulawula indlela kunye nokutshintsha koomatshini kulula ukusebenza, iswitshi yokucoca ngombane. intle ngakumbi kwaye igcweleyo yokuchukumisa isitshixo esinomsebenzi okrelekrele ngakumbi onjengexesha, ulawulo olukude kunye nesiseko se-WiFI kwiqela lenjongo oyikhethileyo.
3/4 venting izantya deisgn elungileyo imfuno zokupheka ezahlukeneyo kunye nofakelo elula indlela Isetyenziswa nezihluzo igrisi aluminiyam ehlambayo, 4 umaleko aluminiyam + 1layer SS cover ukutsala amehlo omsebenzisi.
I-60cm edityanisiweyo ye-Telescopic Cooker Hood ene-2-speed Extraction 906/909
906: IHood yeTelescopic Cooker 60cm enesantya sokutsalwa esiyi-380m³/h. Izantya ezi-2 zokukhupha umoya ngokutshintsha kwamatye. Isibane se-LED sihlala sisebenza ngaphezulu kweeyure ezingama-100,000.
I-909: I-Telescopic Cooker Hood 60cm enesantya sokutsalwa okuninzi khetha ngesandi esiphantsi soxinzelelo lwesandi semotor 2 isantya sokukhupha umoya ngokutshintsha kwamatye. Isibane se-LED sihlala sisebenza ngaphezulu kweeyure ezingama-300,000.
Iindlela ezimbini zokungenisa umoya ozikhethayo: phumela ngaphandle ngombhobho wokungenisa ofakwe okanye usetyenziswe ngokutsha ngaphakathi ngezihluzi zekhabhoni.